Mpizahatany amerikana voasambotra tany Okraina noho ny fanaovana t-shirt Russia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Okraina » Mpizahatany amerikana voasambotra tany Okraina noho ny fanaovana t-shirt Russia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Okraina • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny horonantsary iray niseho tamin'ny tranga tao Okraina, navoaka an-tserasera, ilay voarohirohy, nanao T-shirt nirakitra ny soratra hoe “Russia” sy ny sainan'ilay firenena, dia re hatrany naneso ny polisy mba “hitomany foana”, ary mandrisika hatrany ireo manamboninahitra manizingizina fa “Nazia ianao,” ary “inona no hataonao - sambory aho?”
Mpitsidika amerikana notazonina tany Odessa noho ny fitondran-tenany tsy mendrika.
Nolavin'ny Amerikanina izay tsy nety nataony taorian'ny nitazomana azy tany Ukraine.
Manelingelina ny filaminam-bahoaka ny mpizahatany amerikana, miteraka fifandirana any Odessa any Okraina.
Lehilahy iray, nino fa mpizahatany amerikanina, no nosamborin'ny polisy tany amin'ny tanàna atsimon'i Okraina, Odessa satria voalaza fa niteraka korontana nandritra ny fankalazana tao an-toerana ny tsingerintaonan'ny fahaleovan-tenan'i Okraina tamin'ny USSR.
Odessa Nanamafy ny foiben'ny polisy fa nisy teratany vahiny 26 taona nosamborina noho ny “fanelingelenana filaminam-bahoaka.”
Nisy ny fanambarana navoakan'ny departemantan'ny polisy teo an-toerana namaky hoe: "nandritra ny fisokafan'ny sainam-pirenena Okrainiana teny amin'ny Potemkin Stair, dia nanao fihetsika feno fihantsiana ity lehilahy ity ary niteraka ady tamin'ny olona nandray anjara tamin'io hetsika io."
"Tsy namaly ny fitakian'ny mpitandro ny filaminana hampitsahatra ny asany tsy ara-dalàna ilay lehilahy, dia nanandrana nitsoaka vantany vao nentina tany amin'ny paositry ny polisy izy," nitohy izany.
Ao amin'ny lahatsarin'ny Ukraine zava-nitranga, navoaka an-tserasera, ny voarohirohy, nanao T-shirt voaravaka amin'ny teny hoe “Russia” sy ny sainan'ilay firenena, dia re hatrany maneso ny polisy hoe “mitomany hatrany”, ary mihantsy hatrany ireo polisy manizingizina fa “ianao dia Nazi, ”ary“ inona no hataonao - sambory aho? ” Na dia tsy nisy tsipiriany aza nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny polisy dia toa niresaka tamin'ny lantom-peo amerikana izy ary nitatitra ny media any an-toerana fa olom-pirenena amerikana izy.
Tamin'ny horonantsary iray hafa avy tany an-toerana dia nandà tamim-pahasahiana ny tsy fanaovan-dratsy izy, nanitrikitrika fa "vao avy nandehandeha ary notanan'ny polisy. Ao Okraina ve izany fahalalahana izany? ”
Araka ny tatitra sasany, teraka tany Russia tamin'ny 1994 ny lehilahy ary nifindra tany Etazonia rehefa nifindra monina tany ny fianakaviany.
Ilay rangahy izay mbola tsy voatonona anarana kosa dia am-panontaniana am-bavany ankehitriny ary voarohirohy ho tompon’antoka amina fanararaotana kely sy fikasana tsy fankatoavana didim-pitsarana na fangatahana mpitandro filaminana iray.